DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA D-LINK DWA-525 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Download ndị ọkwọ ụgbọala maka eriri netwọk ikuku D-Link DWA-525
Nkewa bụ otu n'ime arụmọrụ isi anọ kachasị ọnụ. Ọ dịkarịrị anya enwere mgbagwoju anya nke nwere ike ime n'enweghị ya. Excel nwere ọrụ dịgasị iche iche iji jiri arụmụka a. Ka anyị chọpụta otú anyị nwere ike isi mee nkewa na Excel.
Na Microsoft Excel, a pụrụ iji nkeji mee ihe ma ọ bụ iji ọrụ. Divisible na divisor bụ nọmba na adres nke sel.
Usoro 1: nkesa nọmba site na ọnụ ọgụgụ
Enwere ike iji akwụkwọ edemede Excel dị ka onye na-emepụta ihe, na-ekewa otu nọmba site na ọzọ. Ihe nkowa nkwekorita bu slash (n'azụ) - "/".
Anyị na-abanye na mkpụrụ ndụ ọ bụla n'efu nke mpempe akwụkwọ ma ọ bụ n'usoro usoro. Anyị na-etinye ihe ịrịba ama hà (=). Anyị na-edepụta nọmba dividend site na keyboard. Anyị na-etinye akara nkewa (/). Anyị na-edepụta divider site na keyboard. N'ọnọdụ ụfọdụ, e nwere ihe karịrị otu onye na-ekewa. Mgbe ahụ, tinye slash before each divider. (/).
Iji mee nghazi ma gosipụta ya na nyocha, pịa bọtịnụ ahụ. Tinye.
Mgbe nke ahụ gasịrị, Excel ga-agbakọọ usoro ahụ ma gosi ntụgharị nke nchịkọta na cell ahụ akọwapụtara.
Ọ bụrụ na ejiri ọtụtụ ederede mee atụmatụ ahụ, mgbe ahụ usoro nke igbu ha mere site n'usoro ihe omume dịka iwu nke mgbakọ na mwepụ. Nke ahụ bụ, nke mbụ, nkewa na ịba ụba na-eme, ọ bụ naanị mgbe ahụ na mgbakwunye na ntinye.
Dị ka ị maara, ịkekọrịta site na 0 bụ ihe na-ezighị ezi. Ya mere, n'ime mgbalị dị otú ahụ iji mee ngụkọta yiri nke ahụ na Excel, ihe ga-apụta na cell "#DEL / 0!".
Ihe omumu: Na-arụ ọrụ na usoro na Excel
Usoro 2: nkewa nke ọdịnaya sel
Na Excel, ị nwere ike ịkekọrịta data n'ime sel.
Họrọ cell nke a ga-esi pụta na ngụkọta. Anyị tinyere ya akara "=". Na-esote, pịa ebe ebe ọdịda ahụ dị. N'okpuru nke a, adreesị ya na-egosi na ntụ ọka ahụ mgbe ihe ịrịba ama ahụ gasịrị hà. Ọzọ, site na keyboard setịpụrụ ihe ịrịba ama ahụ "/". Anyị na-pịa na cell nke etinyere onye nkesa. Ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ dividers, yana na usoro gara aga, anyị na-egosi ha niile, na-etinye akara nkewa n'ihu ha adreesị.
Iji mee ihe (nkewa), pịa bọtịnụ ahụ "Tinye".
I nwekwara ike ikpokọta, dịka onye nwere ike ịgbanya ma ọ bụ onye na-ekewapụ, na-eji ma adreesị ọnụ ụlọ na nọmba ọnụ ọgụgụ n'otu oge.
Nzọụkwụ 3: nkerisi kọlụm site na kọlụm
Maka nchịkọta na tebụl, ọ dị mkpa mgbe niile ịkọwa ụkpụrụ nke otu kọlụm n'ime data nke kọlụm nke abụọ. N'ezie, ị nwere ike ịkekọrịta uru nke cell ọ bụla dịka akọwapụtara n'elu, ma ị nwere ike ime usoro a ngwa ngwa.
Họta cell mbụ n'ime kọlụm ebe arụpụtara kwesịrị igosipụta. Anyị na-etinye ihe ịrịba ama "=". Pịa na cell nke dividend. Ihe akara akara "/". Pịa na nkesa cell.
Anyị pịa bọtịnụ ahụ Tinyeiji gbakọọ ihe ọ rụpụtara.
Ya mere, a na-atụle ihe a, kama ọ bụ maka otu akara. Iji mee nchịkọta na mpaghara ndị ọzọ, ịkwesịrị ịrụ usoro ndị dị n'elu maka onye ọbụla. Mana ị nwere ike ịchekwa oge gị oge ọ bụla site na ịme otu nhazi. Debe cursor na ala aka nri nke cell na usoro. Dịka ị pụrụ ịhụ, akara ngosi na-egosi n'ụdị cross. A na-akpọ ya akara akara. Jidea bọtịnụ òké aka ekpe ma dọpụta ihe jupụtara na njedebe nke tebụl.
Dika ị nwere ike ịhụ, mgbe ihe a gasịrị, a ga-arụ ọrụ nke ịkepụta otu kọlụm site na nke abụọ, a ga-egosiputa ya na kọlụm dị iche. Nke bụ eziokwu bụ na e depụtaghachiri usoro ahụ na sel ndị dị ala site na iji akara njuputa. Ma, na-echeba n'eziokwu na site na ndabara njikọ niile bụ ndị ikwu, ọ bụghị ihe zuru ezu, na usoro ahụ, ka ị na-agbada, adreesị cell adreesị gbanwere site na nhazi mbụ. Ya bụ, nke a bụ ihe dị anyị mkpa maka otu ikpe.
Nzọụkwụ 4: kewaa otu kọlụm site na mgbe niile
Enwere ikpe mgbe ọ dị mkpa iji kesaa otu kọlụm n'ime otu na otu ọnụ ọgụgụ - mgbe niile, ma bipụta ọnụ ọgụgụ nke nkewa ahụ n'ime kọlụm dị iche.
Anyị na-etinye ihe ịrịba ama hà na cell mbụ nke kọlụm ikpeazụ. Pịa na mkpụrụ ndụ a na-adịghị ahụkebe nke usoro a. Anyị na-etinye ihe ịrịba ama nkewa. Eji aka na keyboard tinye ala a chọrọ.
Pịa bọtịnụ Tinye. Ihe nchoputa nke uzo mbu di na egosi.
Iji gbakọọ ụkpụrụ maka ndị ọzọ ahịrị, dịka na oge gara aga, anyị na-akpọ akara njuputa. N'otu ụzọ ahụ anyị si adọkpụ ya.
Dịka ị pụrụ ịhụ, n'oge a, a na-arụ ọrụ nke ọma. N'okwu a, mgbe ị na-edeghachị data ahụ na akara njuputa, njikọ ahụ ka nọgidere bụrụ onye ikwu. Adreesị nke dividend maka akara ọ bụla na-agbanwe agbanwe na akpaghị aka. Ma onye nkerita di na nke a mgbe nile, nke putara na ihe onwunwe nke nhutaghari aputagh ya. Ya mere, anyị kewara ihe dị n'ime sel nke kọlụm ka ọ bụrụ mgbe niile.
Usoro 5: kewaa otu kọlụm n'ime cell
Ma, ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkekọrịta kọlụm ahụ n'ime ọdịnaya nke otu cell. A sị ka e kwuwe, dịka ụkpụrụ nke njikọta nke nkọwa si kwuo, nhazi nke nkata na onye nkesa ga-agbanwe. Ọ dị anyị mkpa ime ka adreesị nke cell ahụ dịrị n'etiti onye ahụ.
Debe cursor na mpịakọta kọlụm kachasị elu iji gosi nsonaazụ. Anyị na-etinye ihe ịrịba ama "=". Pịa na ebe nke dividend nke uru dị na ya dị. Anyị na-etinye slash (/). Anyị na-pịa na cell nke a na-etinye onye nkesa mgbe nile.
Iji mee ka a zoro aka na onye nkesa zuru oke, ya bụ, mgbe nile, anyị na-etinye akara dollar ($) na usoro tupu usoro nhazi nke cell na uzo. Ugbu a, adreesị a ga-agbanwe agbanwe mgbe ị na-edegharị ya na akara nju.
Anyị pịa bọtịnụ ahụ Tinye, iji gosiputa ihe nchoputa nke uzo mbu na ihuenyo.
Jiri akara njuputa, detuo usoro ahụ na mkpụrụ ndụ ndị fọdụrụ na kọlụm ahụ na ngụkọta zuru ezu.
Mgbe nke ahụ gasịa, ihe ga-esi na kọlụm dum dị njikere. Dịka ị pụrụ ịhụ, na nke a, e nwere nkewa nke kọlụm ahụ n'ime sel nke nwere adres kwesịrị ekwesị.
Ihe omumu: Ezigbo njikọ na Excel
Usoro 6: ọrụ PRIVATE
A pụkwara ịrụ ọrụ pụrụ iche site na iji ọrụ pụrụ iche akpọ NDỊ. Ihe dị iche iche nke ọrụ a bụ na ọ na-ekewa, mana na-enweghị ihe fọdụrụnụ. Ya bụ, mgbe ị na-eji usoro a nke nkewa, ihe ga-esi na ya pụta mgbe niile. N'otu oge ahụ, a naghị emegharị gburugburu dịka iwu iwu mgbakọ na-akwadora n'ozuzu kachasị nso, mana ka ọ dị obere. Nke ahụ bụ, ọrụ ọnụ ọgụgụ nke 5.8 adịghị elu ruo 6, kama iji 5.
Ka anyị lee ngwa nke ọrụ a site na ihe atụ.
Pịa na cell ebe a ga-egosipụta nghazi ngosipụta. Anyị pịa bọtịnụ ahụ "Tinye ọrụ" n'aka ekpe nke usoro mmanya.
Na-emeghe Ọkacha Ọrụ. Na ndepụta nke ọrụ ọ na-enye anyị, chọọ ihe ahụ "KWA". Họrọ ya wee pịa bọtịnụ ahụ. "OK".
Ikwupụta esemokwu arụ ọrụ na-emepe. NDỊ. Ọrụ a nwere arụmụka abụọ: ọnụ ọgụgụ na denominator. Ha abanye na ubi na aha ndi kwesiri ekwenye. N'ọhịa Onye edemede banye dividend. N'ọhịa Onye mkpesa - onye nkesa. Ị nwere ike tinye ma nọmba na adreesị ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụ ndụ nke data dị. Mgbe emechara ihe niile, pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Mgbe omume ndị a, ọrụ ahụ NDỊ nyochaa data ma wepụta azịza nke cell ahụ nke e kwuru kpọmkwem na nzọụkwụ mbụ nke usoro nke a.
A pụkwara itinye ọrụ a na aka ya n'enweghị iji ọkachamara ahụ. Nkọwa ya bụ:
= AGBỤKỌ (nọmba ọnụ ọgụgụ)
Dịka ị pụrụ ịhụ, ụzọ nke isi nke nhazi na usoro Microsoft Office bụ iji usoro. Ihe nkesa nke ha bu slash - "/". N'otu oge ahụ, maka ụfọdụ ebumnuche, ọrụ ahụ nwere ike iji ya na nhazi NDỊ. Ma, ọ dị mkpa iburu n'uche na mgbe ị na-atụkọta n'ụzọ dị otú a, a na-enweta ihe dị iche na-enweghị ihe fọdụrụnụ, dị ka ọnụọgụgụ. N'otu oge ahụ, ọ bụghị dị ka usoro niile a nabatara, ọ bụ obere ọnụọgụ na uru zuru oke.